Homepage - Happy Live
The Best Of Myanmar IPTV Server
Happy Live SPORT FOOTBALL MOVIES KIDS DOCUMENTARY FASHION WORLD NEWS ADULT (18+)
အစုံလင်ဆုံးသော အားကစားရုပ်သံလိုင်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလိုင်းများ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ ကလေးများအတွက် ကာတွန်းကားများ၊ နိုင်ငံတကာ သတင်းများနှင့် Adult (18+) ရုပ်သံလိုင်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ရန်အတွက် HAPPY LIVE APK ကို အခုပဲ ဒေါင်းလုပ်ရယူလိုက်ပါ။
For Android PhoneFor Android TV
တိကျမြန်ဆန်ပြီး နွေးထွေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများအပြင်၊ After Sales Services ကောင်းမွန်မှုများဖြင့် HAPPY LIVE TEAM
Android Phone / TV / Box
Android Opreation System ကို အသုံးပြုတဲ့ Android Phone, Android TV and Android Box တို့ဖြင့် Happy Live APK ကို install လုပ်ပြီး Channels များကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
iOS Devices / iPhone / iPad
Apple Devices တွေဖြစ်တဲ့ iOS Devices တွေဖြစ်သော iPhone , iPad , Macbook and Apple TV တို့ဖြင့်လည်း Happy Live Server ကို အသုံးပြုပြီး Channels များကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Happy Live Server မှ အားကစားလိုင်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်၊ ကာတွန်း၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၊ နိုင်ငံတကာသတင်းလိုင်းများ၊ အစရှိတဲ့ များပြားလှတဲ့ ရုပ်သံလိုင်းများကို VLC Player, Pot Player, StreamBlue Player and IPTV Smater Pro For PC အစရှိတဲ့ Softwares များဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Happy Live APK ကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုကာ နိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကောင်းမွန်တည်ငြိမ်ပြီး HD/FHD ရုပ်သံလိုင်းများဖြင့် အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ ရုပ်သံလိုင်းများကို မိမိတို့ ရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
လွယ်ကူ လျှင်မြန်တဲ့ Happy Live APK ဖြင့်ရုပ်သံလိုင်းများ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
Happy Live Facebook Page and Group ဟာ မကြာခဏ Report ထုခံနေရပါသဖြင့် Viber No. များကိုကျေးဇူးပြုပြီး မှတ်သားထားပေးပါခင်ဗျား။
မြန်ဆန်တိကျပြီး နွေးထွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့အတူ After Sales Services ကောင်းမွန်သော Happy Live…
Happy Live Packages
အင်္ဂါနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့ အထိ မနက်ပိုင်း 10:00 နာရီမှ ညပိုင်း 9:00 အထိ ဝယ်ယူခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
Happy Live Packages များကို အင်္ဂါနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့ အထိ မနက်ပိုင်း 10:00 နာရီမှ ညပိုင်း 9:00 အထိ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။
Sport Plus Package (Special Offer )
စွာပါဝင်သော Package ဖြစ်ပါတယ်။
MM_Sub Movie + Live Package
အားကစားလိုင်းများအပြင် နိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်းများ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ ကလေးများအတွက် ကာတွန်းကားများ၊ နိုင်ငံတကာ သတင်းများ၊ MM_Sub Movie (မြန်မာစာတမ်းထိုး Movies ) အစုံအလင်ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်တဲ့ Package တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
MM_Sub + Live + Adult Package
Sport Plus Package and MM_Sub Movie + Live Package
တို့မှာပါဝင်တဲ့ လိုင်းတွေ အားလုံးပါဝင်တဲ့ အပြင် လူကြီး ၂၁ ယောက်စုကြည့်ရမည့် ကြည်တောက်ရှင်း
လိုင်းပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့Package တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Happy Live Package များကို Viber : 09 682255975, 09 422216434 ကနေတစ်ဆင့်လည်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။
1 Account Allow3Devices
အကောက်တစ်ခုကို Devices3ခုအထိ တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်ရှုနိုင်ရန်တွက် Happy Live မှခွင့်ပြုပေးထားပါသည်။ လွယ်ကူလျှင်မြန် စွာဖြင့် အားကစားလိုင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းများစွာကို Happy Live APK ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
10:00AM To 9:00PM Hour Support
အင်္ဂါနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ မနက်ပိုင်း ၁၀ နာရီမှ ညပိုင်း ၉ နာရီအထိ အကောက်များဝယ်ယူခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အစုံလင်ဆုံးသော အားကစားရုပ်သံလိုင်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလိုင်းများ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ ကလေးများအတွက် ကာတွန်းကားများ၊ နိုင်ငံတကာ သတင်းများနှင့် Adult (18+) ရုပ်သံလိုင်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ရန်အတွက် HAPPY LIVE TEAM ကိုတည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– Happy Live Team
Happy Live Packages များကို ဝယ်ယူခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းများအတွက် လွယ်ကူသက်သာ မြန်ဆန်ပြီး အသုံးများတဲ့ Payment များဖြင့် ငွေပေးချေ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Viber : 09 682255975, 09 422216434
KBZ Banking, KBZ Pay, CB Banking, CB Pay, AYA Banking, Yoma Banking, MPT Money, Wave Money, Mytel Pay
Who Develope This Happy Live ?
ဝိုင်ဖိုင် သို့မဟုတ် အင်တာနက်လိုင်းများကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှက်သက်တဲ့ ရုပ်သံလိုင်းများကို အချိန်နေရာ ဒေသမရွေး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့် ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ရန်တွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Founder & CEO, Happy Live
Viber : , 09 682255975, 09422216434